Dhamaan hadiyadaha iyo qiima dhimista aad maanta heli karto - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Dhammaan hadiyadaha iyo qiima dhimista aad heli karto maanta - BGR
Holy Moly ... jiiska sawirka ku yaal dusha sare ee maqaalkani wuxuu u muuqdaa mid macaan, mise waa maxay? Waqti badan ayey qaadanaysay tan iyo markii aan kahadalnay mid ka mid ah ciidaha nacasnimada ah ee la been abuuray sababtoo ah runtii waxay bilaabeen inay naga xanaaqaan. Dabcan, way ka wanaagsan yihiin inta badan ciidaha dhaqanka ee la been abuuray, sababta oo ah waxaad ku raaxeysan kartaa ganacsi wanaagsan halkii aad culeys ku saari lahayd oo aad ku tufin lahayd hadiyado. Laakiin sidaas oo ay tahay, waxaa jira fasax la yaab leh oo ku saabsan wax walba, oo waanan sii adkayn karin. Ilaa maanta, tani waa kiiska.
Haddii ay jirto hal shay oo runtii u qalma in lagu dabbaaldego Mareykanka, waa jilaahaas. Si daran, kaliya wax uun ka fiiri halkaa. Waa wax la yaab leh oo ah injineernimada cuntada oo waa uun macaan. Xaqiiqdii, waxa kaliya ee ka fiican farmaajada waa farmaajada lagu helo qiimo dhimis ama xitaa bilaash. Nasiib wanaag, maanta waa Maalinta Qaranka ee Cheeseburger waxaana jira dalabyo fara badan!
Sida had iyo jeer kiisku yahay, Offers.com waxay aruurisay dhamaan hadiyadihii ugu wanaagsanaa iyo dhimistii loogu talagalay Maalinta Qaranka ee Cheeseburger 2019 Day, oo waxaad ka heli doontaa dhammaantood hoos ku taxan.
Applebee ee: Goobaha oo dhan kama qeyb qaataan Sidaa darteed iska hubi inaad u wacdo deegaankaaga Applebee laba-laab. hubi. Kaqeybgalida meelahan ayaa soo jeedin doona Nooca Classic Burger ama Classic Cheeseburger oo leh noocyo aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay 6,99 $ Sebtember 18. ciyaarta korantada, boqoshaada Switzerland iyo hilib doofaar ama hilib doofaar) gratuitement marka aad soo dejisanaysid Codsiga B.GOOD . Soo bandhigid ayaa ansax ah laga bilaabo 16 illaa 22 Sebtember.
Madow Madow: 18 Sebtember kaliya, martida casho ee xaafada BullsEye Bar waxay heli karaan farmaajo (Steakhouse Bacon Cheeseburger ama Guacamole Cheese Burger), 16 Ounces. biil qabyo ah iyo shiilan la socda kaliya 12,99 $ (14,99 $ gudaha Hawaii, 11,50 $ gudaha Alaska bilaa biir).
Burger 21: Daabacaad xaddidan Super Cheesy Burger wuxuu soo laabtay hal maalin oo keliya bisha Sebtember 18. Eeg faahfaahinta .
BurgerFI: Iibso farmaajo iyo hel hal ilaa hal doolar bisha Sebtembar 18 meelaha laga qeyb qaadanayo. Waa inaad sheegtaa ama muujisaa u soo bandhigaha si aad u isticmaasho. Dukaanka ku shaqeeya oo ansax ah oo aan ansax u ahayn amarada internetka, taleefanka ama soo-gaarsiinta.
Burgerville: Waqooyiga Galbeedka Baasifigga waxaa laga helaa bur-bur qaali ah qiimaha 1 $ midkiiba Sebtember 18. Xadidaa shantii macaamil ganacsi lacageed (laba baabuurkiiba). Burgerville waxay sidoo kale si rasmi ah ugu dhawaaqday Maalinta Cheeseburger inay tahay maalin fasax, sidaa darteedna shaqaalaha waxay heli doonaan gunno fasax maalin ah maalintaas. Maalinta Cheeseburger iyada oo la iibsanayo cabbitaan khamri oo weyn oo aan khamri ahayn, Sebtember 18 kaliya.
Jeegaanta: Ku dabbaaldeg isku darka-iyo-ciyaarta 2-For menu . Burgiga Fry Lover, rooti digaag ah oo digaag ah, rooti kalluun qabow leh iyo jiilaal labadaba waxay ku jiraan 2 for 3 $. Waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'Sandwich' waa 2 oo loogu talagalay 4 $ ama 2 oo loogu talagalay 5 $.
Doghaus: Hel a laba jibaaran oo jiis leh bilaash maalinta qaran ee farmaajo. Eegso araajidaada Dog Haus min 11h00 illaa 22h00. Bisha 18 ee Sebtember, waxaad heli doontaa laba jibbaar oo jiis ah '' The Haus ''. Heshiiska ayaa quseeya tuugada makhaayadaha ee caadiga ah, sida Freiburger, The Mensch, The holver iyo wixii intaa ka badan. Qandaraaska ayaa lagu shaaciyay boggooda Facebook.
Wiilasha Beeraha: Iibso farmaajo weyn oo loogu talagalay kaliya 2 $ laga bilaabo 14h00. xir Sebtember 18 kaliya. Laguma dari karo deeqo kale. Xadka laba jeer martida kasta. Eeg faahfaahinta .
Fuddruckers: 18-da bisha Sebtembar, qaado tartamada Burger of saddex rodol . Dhameystir hamburger weyn iyo 1 lb oo shiilan saacad kuna guuleysta kaarka hadiyadda $ 20 iyo t-shirt guul ah. Boos sii qabsashadaada ugu yaraan saacadaha 24 kahor halkan .
GrubHub: Iyadoo loo marayo barnaamijkeeda cusub, Faa'iidooyinka Grubhub waxay soo bandhigayaan dalabyada soo socda maalinta ama agagaarka Maalinta Cheeseburger National (marin loo maro barnaamijka):
Instacart: Ma waxaad tahay kuwa ugu xamaasadda badan Cheeseburger farmaajo? Dalbo 18 $ oo ka mid ah alaabada Kraft dusheeda Instacart oo keydi 5 $ ama fur furidda dhoofinta bilaashka ah. Bixinta ayaa shaqeyneysa ilaa Sebtembar 29.
Jack ee sanduuqa: Soo hel hamburger bilaash ah oo dookhaaga ah oo aad ku iibsato barnaamij kasta oo aad ka iibsato makhaayadaha ka qeyb qaadanaya. Kuubannada waxaa loo heli karaa adeegsi keli ah oo loo maro barnaamijka moobiilka Jack in Box ah kaliya bisha Sebtember 18.
McDonald ee: Waqti xaddidan, iskuday ciyaartan isku-dhafka ah iyo kan ciyaarta. Iibsiga gelitaanka u qalmidda (oo ay ku jiraan rubuc-rodol oo jiis ah) oo hel hal qiime ama wax ka yar xaddiga u-qalmitaanka 1 $. Eeg xulashooyinkaaga .
Miller's Ale House: Isticmaal tigidhkan la daabacay (ama tusi taleefankaaga) si aad u hesho jumlad farmaajo iyo 5.99 $ xanjo laga bilaabo 11h illaa 15h bisha Sebtember 18.
MOOYAH: Kuwa leh barnaamijka abaalmarinta abaalmarinta waxay helayaan a farmaajo bilaash ah iyada oo la iibsanayo shiilayda Faransiiska iyo cabitaan ama ruxitaanka bisha Sebtembar 18. Waa inaad haysataa app si aad u hesho deeqda kahor xiritaanka xafiisyada 18 September. Goobaha oo dhan kama qeyb qaataan Eeg faahfaahinta .
Sagaashan iyo sagaal makhaayadood: 5,99 $ Cheeseburgers loogu talagalay Maalinta Qaranka ee Cheeseburger (18 Sept.) Maalinta oo dhan baarka iyo makhaayadda
Red Robin: Hel shiilan steak steless iyadoo la iibsanayo cabitaan caadi ah iyo Gourmet Cheeseburger (5 $) bisha Sebtember 18. Waa inaad qado qaadataa si aad uhesho dalabkan. Eeg faahfaahinta .
Shari ee: Haddii aadan cunin hilibka, waa inaadan hilmaamin Maalinta Qaranka ee Cheeseburger. Sharib wuxuu ku deeqay Khudaarta ka baxsan Burger (oo leh ama aan lahayn cheddar jiiska) oo ku yaal moofo loo yaqaan'zelzel root ' kaliya 1 $ maalinta oo dhan 18 sebtember. Waa inaad ka diiwaangashantahay barnaamijka Abaalmarinta Shariicada oo ku dhex cun. Looma baahna soo iibsi kale. Caadi ahaan, burgerkan wuxuu qaataa qiyaastii 8 dollars.
Hilibka Burger Grill: Ku deeqi 2 Dollar si Maya Gaajo Cunto ilaa Sebtembar 24 oo hel shahaado loogu talagalay Charburger bilaash ah . waxay ansax u tahay booqashadaada soo socota ilaa Oktoobar 1er.
Wendy ee: 18 Sebtember kaliya, hel Dave's Single ama Double oo hel kan labaad oo bilaash ah. Meel ku galida iyo ka bixida oo keliya, amar kuma bixin qadka. Intaa waxaa dheer, Bacda Biggie waxay ku kacdaa 5 USD waxaana ku jira laba weji hilib doofaar, nuggets afarta xabbo, shiilan yar yar iyo galaas.
Qalcaddii cad et Xirmooyinka fardaha 10 qiimaha 6,99 $ muddo xadidan.
Isha Sawirka: Hawksmoor / Shutterstock
7 waxay siisay barnaamijyada iPhone ee iibka bilaashka ah ee '18 September' - BGR